पाका महिला गर्भवती हुनु कत्तिको जोखिम ? | NepalDut
छोरीको मृत्युले शोकाकुल भएकी बेलायतकी एक महिला छोरीको अन्डामार्फत आफू गर्भवती हुन चाहान्छिन्। अर्थात छोरीको अन्डालाई प्रयोग गरी हजुरआमा बन्न चाहान्छिन्। के यस्तो गर्भ बोक्दा खतरा छैन त?
सामान्यतया युवतीहरुको तुलनामा वृद्ध महिलाहरु बच्चा जन्माउने दृष्टिकोणले उच्च खतरामा हुन्छन्। तर ५० वर्षमाथिका महिलाहरु इन भाइट्रो फर्टिलाइजेसन (आइभीएफ) माफर्त गर्भवती हुने गरेका छन्।
लामो समय बच्चा नभएका महिलाहरु आईभीएफमार्फत उपचार गरिरहेकै बेला पाका महिलालाई पनि यो उपाचार पद्धति निकै प्रभावकारी भएका उदाहरण पाइन्छन्।
तर बेलायती महिला (श्रीमति एम) ले आफ्नी दिवंगत छोरीको इच्छा पुरा गर्न चाहेको बताउछिन्। छोरीको आज भन्दा पाँच वर्ष अगाडि (सन् २०११) मा बाउल क्यान्सर भएर २८ वर्षमा निधन भएको थियो।
मृत्यु अगाडि उनले आफ्नो अन्डालाई भन्डारण केन्द्रमा चिस्याएर राखेको न्युर्योकटाइम्सले जनाएको छ। छोरीको चिस्याएको अन्डालाई न्युर्योकमा लैजान पाउँ भनि श्रमिती एमले गरेको निवेदनलाई गत जुन ३० बलायतको अदालतले अनुमति दिएको छ।
न्युर्योकमा उनले कुनै डोनरले दिने वीर्यलाई छोरीको अन्डामार्फत हजुरआमा बन्ने योजनामा छन्। सो भ्रुणलाई ती महिलाको पाठेघरमा राखिनेछ ताकी उनी हजुरआमा बन्नेछिन्।
यदि श्रीमति एम आफ्नो योजनामा सफल भइन भने निश्चय नै उनी कोखबाटै नाती जन्माउने विश्वकै पहिलो पहिलो महिला हुनेछिन्। सन् २०११ मा भर्जिनियाकी ६१ वर्षीय महिलाले आफ्नी ३५ वर्षकी छोरी र ज्वाईको गर्भ आफ्नो पाठेघरमा राखेर हजुरआमा बनेकी थिइन्। छोरीमा मिसक्यारियजको समस्या देखिएपछि उनकी आमाले गर्भ बोकेकी थिइन्। त्यस्तै यस वर्षको सुरु तिर एक महिला छोरीको गर्भधारण गरी आमा बनेकी थिइन्।
आमा बन्न चाहने वृद्ध महिलाले गर्भवती अवस्थामा धेरै कठिनाइ सामना गरेका छन्। सन् २०१० मा इजरायलमा गरिएको एक अध्ययनमा युवतीहरुको तुलनामा ४५ वर्ष काटेका महिला गर्भवती हुँदा उनीहरुलाई गेस्टसनल डायबिटिज र उक्तरक्तचापको शिकार हुने तीन गुण बढी सम्भावना हुन्छ।
अझ बृद्ध अवस्थामा आमा बन्न चाहने महिलाको कोखलाई पिम्याचुअर वर्थले तुहाइदिएको अध्ययनमा उल्लेख छ। उनीहरुलाई प्राय सी सेक्सन डेलिभरीको आवश्यकता दर्शाइएको थियो।
पाका महिला गर्भवती हुँदा उनीहरुको मुटु र रक्तनलीले थप रगत पम्प गर्न सक्दैन की भन्ने चासो र चिन्ता पनि उत्तिकै भएको युनिर्भसिटी अफ शिकागेका चिकित्सक डा डेभिड कोहेन बताउँछन्।
किनकी गर्भवती अवस्थामा महिलाको रगतको मात्र करिब दोब्बर हुनुपर्छ। पाका महिलाको रक्त नली तन्किने सम्भावना कम हुने हुँदा उनीहरुलाई उक्त रक्तचापको खतरा बढी हुन्छ।
यसका बाबजुद पनि केही महिलाले वृद्ध अवस्थामा पनि आइभीएफमार्फत सन्तान जन्माउन सफल भएका छन्। सन् २०१२ मा गरिएको एक अध्ययनमा पनि अनुसन्धानकर्ताहरुले आइभीएफ मार्फत सन्तान उत्पान गरेका ५० वर्षमाथिका १०० महिलाको केसको अध्ययन गरेका थिए।
आइभीएफ अगाडि महिलाहरुको गहिरो स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। मुटुको अल्टासाउन्डलगायतका शारिरिक र मानसिक स्फूर्तीपनको विस्तृत परीक्षण गरिएको थियो।
पाका महिलामा उच्च दरमा गेस्टेस्नल डायबिटिज भएको र समय नै नपुगी सन्तान जन्माएका अनुसन्धानकर्ताहरुले पत्ता लगाएका थिए। पाका गर्भवती महिलामा सानो उमेरमा नै गर्भवती हुने अन्य महिलाको तुलनामा बढी रक्तचापको समस्या देखिएको थियो। त्यस्तै ८० प्रतिशत पाका गर्भवती महिलाको सी सेक्सनमार्फत बच्चा जन्माइएको थियो।
उमेरले डाँडो काटेसँगै स्वभाविक रुपमा महिलाको कोखमा पनि परिवर्तन आउँछ। भ्रुणको वृद्धिको लागि कोखपनि उर्वर हुनुपर्छ , कोलम्बिया युनिर्भसिटी मेडिकल सेन्टरका प्रजनन तथा बाँझोपन उपचार शाखाका चिकित्सक डा मार्क साउर भन्छन्। पाका महिला गर्भवती हुनुअगाडि होल बडी चेक गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
पाका महिलामा उच्च दरमा गेस्टेस्नल डायबिटिज भएको र समय नै नपुगी सन्तान जन्माएका अनुसन्धानकर्ताहरुले पत्ता लगाएका छन् । पाका गर्भवती महिलामा सानो उमेरमा नै गर्भवती हुने अन्य महिलाको तुलनामा बढी रक्तचापको समस्या देखिएका छन्। ८० प्रतिशत पाका गर्भवती महिलाको सी सेक्सनमार्फत बच्चा जन्माइएका छन्।